Shiinaha TIG alxanka Robot-saaraha iyo Alaab-qeybiye | Yunhua
Robot alxanka TIG
GTAW waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu qoro qaybo dhuuban oo bir bir ah iyo biraha aan birta ahayn sida aluminium, magnesium, iyo alloys copper. Nidaamku wuxuu siiyaa hawlwadeenka inuu ka xakameeyo alxanka ka badan geedi socodka tartamada sida alxanka gaaska birta gaashaaman iyo alxanka gaaska birta gaaska, taasoo u oggolaaneysa weldiyo xoog badan oo tayo sare leh Si kastaba ha noqotee, GTAW waa mid aad u adag oo adag in la barto, iyo waliba, way ka gaabis badan tahay farsamooyinka kale ee alxanka. Nidaam laxiriira, alxanka qaansada qaansada, wuxuu adeegsadaa toosh yar oo alxam ah si uu u abuuro qaanad alxanka oo diirada saaraan taas oo keentay in badanaa iswada.
Yunhua waxay isticmaashaa tallaabooyin ka hortag gaar ah inta lagu jiro alxanka TIG, waxaana jiri doona buug gaar ah oo loogu talagalay hawlwadeenka, kaliya haddii hawlwadeenku raaci karo buugga, oo uu ku celcelin karo dhowr jeer, si dhakhso leh ayuu ula wareegi karaa.
Halbeegyada alxanka alxanka TIG
Danab aqbasho / soo noqnoqoshada
Saddex-waji380V (+/-) 10% 50Hz
Awoodda gelinta la qiimeeyay (KVA)
Hada la qiimeeyay (A)
Joogtaynta culeyska la qiimeeyay (%)
DC iyo joogto joogto ah Mashiinka alxanka （A）
Garaaca wadnaha Meesha ugu sarreysa （A）
Saldhig hadda （A）
Waajibaadka wadnaha （%）
Inta jeer ee garaaca wadnaha （Hz）
TIG Arc wuxuu bilaabmayaa hadda （A）
Arc joojinta hadda （A）
Waqtiga sii kordhaya （S）
Waqtiga hadda yaraanaya （S）
Waqtiga kahor-socodka （S）
Waqti lumaya joojinta gaaska （S）
Qaabka shaqada ee qaanso joojinta hadda
Laba-tallaabo 、 Afar-tallaabo
TIG tijaabada qaabka arc
Alxanka alxanka qaansada alxanka hadda
Heerka ilaalinta Shell
Yunhua waxay u soo bandhigi kartaa macaamiisha shuruudo kala duwan oo ah bixinta. Macaamiisha ayaa dooran kara habka rarka ee badda ama hawada iyadoo la raacayo mudnaanta degdegga ah. Kiisaska baakada robot YOO HEART waxay buuxin kartaa shuruudaha xamuulka badda iyo hawada. Waxaan diyaarin doonaa dhammaan faylasha sida PL, shahaadada asalka, qaansheegta iyo faylasha kale. Waxaa jira shaqaale shaqadiisa ugu weyni tahay hubinta in aalado kasta oo ka mid ah macaamiisha dekedda la geyn karo iyada oo aan wax dhibaato ah la soo gaadhin 40 maalmood oo shaqo ah.
Macaamiil walba waa inuu ogaadaa robot YOO HEART wanaagsan kahor intaysan iibsan. Mar alla markii ay macaamiishu yeeshaan hal rooti oo YOO HEART ah, shaqaaluhu wuxuu 3-5 maalmood tababar bilaash ah ku heli doonaa warshadda YOO HEART. Waxaa jiri doona koox Wechat ama WhatsApp group ah, farsamayaqaanadeena masuulka ka ah adeega iibka kadib, korontada, alaabada adag, sofweerka, iwm., Hadii hal dhibaato dhacdo laba jeer, farsamayaqaankeenu wuxuu aadayaa shirkada macaamiisha si uu u xaliyo dhibaatada. .
Q1. Maxay yihiin codsiyada ugu fiican ee nidaamka alxanka TIG ee robotka ah?
A.Qiyaasta-sare, codsiyada noocyada hooseeya ayaa si fiican ugu habboon alxanka robotka; si kastaba ha noqotee, codad hoose, codsiyo kaladuwan oo sareeya ayaa sidoo kale shaqeyn kara haddii lagu hirgeliyo qalabaynta saxda ah. Shirkaduhu waxay u baahan doonaan inay tixgeliyaan kharashka dheeriga ah ee qalabaynta si loo go'aamiyo haddii nidaamka alxanka robotku wali u bixin karo soo celin adag maalgashiga hore. Sida alxanka TIG, dalabka ugu fiican waa jajab khafiif ah iyo bir.
Q2. Kee baa si fiican u isticmaala? HF TIG alxanka ama Qaadista alxanka TIG?
A. Xulashada ugu caansan uguna fiican waa adeegsiga Bilowga Joogtada ah ee soo saaraya qaanso soo noqnoqota oo awood u leh inay ionizing hawo ka dhigto soona afjarto farqiga u dhexeeya barta tungsten iyo qaybta shaqada. Bilowga Joogtaynta Sare waa hab taabasho-yar wuxuuna abuuraa ku dhowaad faddarayn haddii tungsten ka weynaato ama amperage aad u sarreyso bilowga. Waa xulasho aad u fiican aluminiumka alxanka, runtiina waa doorashada keliya ee la aqbali karo. Ilaa aad ubaahantahay inaad alxamid Aluminium, maahan inaad runti leedahay bilow Frequency Sare, laakiin way fiicantahay inaad alxamiso AC ama DC haddii aad ikhtiyaar leedahay.
Q3aad. YOO QALABKA TIG robot alxanka ma isticmaali karaa buuxiyo?
A.Haa, waxaan nahay kuwa yar oo isticmaali kara fillerka marka alxanka TIG. Qaar badan oo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha suuqa ayaa kuu sheegaya in aaladooda loo adeegsan karo alxanka TIG, waxaad weydiin kartaa su'aalo ay ka mid yihiin: sida loo shaandheeyo HF ?, aaladdaada loo adeegsan karo alxanka TIG ee wax buuxiyo?
Q4. Sidee loo dejiyaa isha korontada marka la isticmaalayo alxanka TIG?
A. Mashiinkaaga alxanka waa in loo dejiyaa DCEN (Direct current electrode negative) sidoo kale loo yaqaan 'polarity toosan' oo loogu talagalay shay kasta oo shaqo u baahan in la alxamo ilaa ay ka kooban yihiin aluminium ama magnesium mooyee. Joogtaynta sare ayaa lagu wadaa inay bilaabato taas oo laga dhex helay maalmahan inverters. Socodka Post waa in la dhigay ugu yaraan 10 ilbiriqsi ugu yaraan. Haddii A / C la joogo waxaa lagu wadaa in lagu dejiyo dejin ku habboon DCEN. Deji xiriiriyeyaasha iyo amperage badalashada meelaha durugsan. Haddii walxaha u baahan in la alxamo uu yahay kala-furnaanta aluminium waa in lagu dhejiyaa A / C, dheelitirka A / C waa in loo dejiyaa ilaa 7 iyo soo-noqoshada soo noqnoqota waa inay ahaataa mid joogto ah.
Q5. Sidee loo sameeyaa gaaska gaaska inta lagu jiro alxanka TIG?
A. alxanka TIG wuxuu adeegsadaa gaaska aan shaqeynin si uu uga ilaaliyo aagga alxanka faddaraynta. Sidaas awgeed gaaskan aan firfircooneyn ayaa sidoo kale lagu sheegay inuu yahay gaas gaashaan. Xaaladaha oo dhan waa inay ahaadaan argon mana jiro gaas kale oo aan firfircooneyn sida neon ama xenon iwm gaar ahaan haddii alxanka TIG la doonayo in la sameeyo. Waa in la dhigaa ilaa 15 cfh. Alxumida aluminium keli ah waxaad isticmaali kartaa isku darka 50/50 ee argon iyo helium.
Hore: Raridda iyo dejinta robotka HY-1010B-140
Xiga: Mig alxanka Robot
8 Farsamaynta Alxanka Rootka Alxanka oo leh Labo Pos ...